Afaka ho lasa mpivarotra Forex ara-barotra ve ny olona? | FXCC
fanabeazana - Lahatsoratra & torolalana - forex basics articles - Afaka ho lasa mpivarotra Forex ara-barotra ve ny olona?
Afaka ho lasa mpivarotra Forex ara-barotra ve ny olona?
Azo antoka fa tonga ny mpivarotra Forex Retailers amin'ny endriny rehetra sy ny haben'izy ireo, avy amin'ny lafivalon'ny tany rehetra. Ny sasany dia mandray haingana ny asa, ny sasany dia maharitra ela, ny sasany dia manao izany amin'ny fotoana sasany, ny hafa ny fotoana feno, ny sasany dia sambatra ny manana fotoana hanokafana ny tena olana sarotra, ny hafa tsy izany.
Io no teboka farany izay tiantsika hifantoka amin'ny voalohany, satria mandositra eo anoloan'ilay fahendrena ekena fa misy tsy hita, talenta tokana tafiditra amin'ny varotra, raha ny zava-misy dia ny talenta azontsika ifandraisana amin'ny fahombiazan'ny varotra dia ny ' Tena talenta tokoa izy. Maro amintsika no ho tafintohina amin'ny fivarotana, fa tsy endrika. Ohatra, nisy fiakarana goavana teo amin'ny varotra varotra antsinjarany, hatramin'ny nidiran'ny tahan'ny fanampiana vonjy taitra ny hetra, nanomboka tamin'ny 2008.
Izahay dia voafitaka amin'ny sehatra ara-barotra sy ny varotra varotra napetrak'ireo media mainty momba ny varotra; tanora volom-borona, rindrina lavenona, telefona roa an-tariby (iray amin'ny mason-tsofina), satria izy ireo dia mamolavola "mividy, mivarotra" torolàlana amin'ny namany. Ny sary toy izany dia ao amin'ny tranom-bakoka iray amin'ny famindrana zavakanto, satria izy io dia ampahany kely amin'ny varotra raharaham-barotra, amin'ny endriny rehetra, izay mbola mitarika izany. Ny tena talenta amin'izao fotoana izao dia mifototra amin'ny famatsiam-bola ara-bola, satria tsy misy fitaovana enti-manentana hivarotra tsenam-bola izay hahavokatra vokatra maharitra ela, izay ahafahantsika manangana fidiram-bola sy ho avy.
Mihoatra ny 80% ny varotra ny varotra Wall Street no algorithm amin'izao fotoana, ary ny ampahany betsaka amin'izany dia mitarika amin'ny sehatr'asa antsoina hoe HFT, ny varotra avo lenta, ny tarehimarika dia mitovy amin'ny fifanakalozana ara-barotra. Raha misy talenta tafiditra amin'ny fifanakalozana dia miaraka amin'ny maths sy ny fizika izay mandika sy mandrindra programa handraisana, dia tsy mpihira manerantany izay ahiana ny EUR / USD mety hipoitra, mifototra amin'ny fampifangaroana teknika ara-teknika sy ny vaovao farany momba ny kalandrie.
Noho izany, rehefa miverina amin'ny fanontaniana voalohany isika; "Mety ho lasa mpivarotra mahomby ve ny olona?" Eny ny valiny, raha manana fotoana izy ireo. Ny fotoana dia angamba (ankoatra ny olana ara-bola mahavariana), ny tena fototry ny krizim-pifaneraserana mety hitranga amin'ny fahombiazantsika.
Araka ny efa nodinihina imbetsaka, tsy mila vola be ianao hanombohana ny varotra, raha ny marina (amin'ny voalohany) dia tsara kokoa raha tsy mitaky be loatra amin'ny tahirinao ao amin'ny kaontinao voalohany ianao. Tany am-piandohan-javatra dia te-hahita ny fiverenana isika, fa fiverenana maotina fotsiny amin'ny fampiasam-bola (ROI) alohan'ny fanalefenana. Raha afaka manangana tetikasa 1% isan-kerinandro isika, ny 50% ROI isan-taona amin'ny fitomboan'ny taona eo amin'ny kaontintsika ara-barotra kely, izay afaka misokatra ho an'ny $ 500, dia afaka matoky isika fa hametraka vola fanampiny ao amin'ny kaontintsika sy ny varotra ambony antsapaka.
Na izany aza, raha tsy ampy ny fotoana ananantsika, ahoana no hampivelarana ny fahaiza-manao ilaina hahatongavana amin'ny mpivarotra? Moa ve ny mahita ny fotoana hivarotana ho toy ny fahaiza-manao tsy misy dikany sy tsy fantatra? Angamba izany. Ilaina ny fahaiza-manao fototra tena izy izay matetika tsy miraharaha antsika, toy ny; fandaminana, famaizana, famerenana, fahaiza-manao izay mety tsy hifanerasera amin'ny varotra raha vao mahita azy io ho fotoana iray.